EHANG 184: Rokutanga DZAKANAKARA ZVEKUSHANDISA UYE WAKADAI - Afrikhepri Fondation
Iyi inopenga yakazara drone ichakwanisa kukufambisa iwe chero kwaunoda. Zvakareruka sedonje, iyo Ehang 184 drone yakagadziriswa neChina inokwanisa kutakura murume chero kwaanoda. Ingoisa kero yeyako kwaunoda kuenda, gadzikana zvakanaka uye ita kuti utakurwe neichi chidimbu chinoshamisa chinokudonha kubva zvakachengeteka. Iko kunyepedzera kunoitika kune iyo Chinese dhiza rekugadzira Ehang. MuLas Vegas, kuConsumer Electric Show pakaunzwa iyo Ehang 184 drone, zvinoenderana nemugadziri anokwanisa kutakura murume pasi pe100kg kwemaminitsi makumi maviri nemasere.
Nekudaro, iwo mitemo yakaiswa nemasangano ehurumende anotarisira kushambadzira kwemhepo haazove nekufadzwa nekusvika pamusika weiyi drone. Iyi nzira yekufambisa parizvino haisi pamutemo, asi mugadziri wayo anoti "inoshanda nekubatana nevane masimba, pasi rese". Iyo purojekiti ichave inotengeswa muna 2016 uye ichaita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Uye zvakare, iyo anti-ajali system inoiswa muhusungwa nekukasira, mota ino bhururuka saka yakachengeteka zvakanyanya. Kambani yekuongorora ichave iripo kwemaawa makumi maviri nemaviri pazuva, mazuva manomwe pavhiki yekupindura kune emergency.
Mumaguta mune traffic yakawanda, muchina uyu uchaisa shanduko mukufambisa kwemunhu. Ehang CEO Huazhi Hu akati "kuita kufamba kwemhepo nekukurumidza, kuve nyore uye nyore nyore ndizvo chinangwa changu chikuru muhupenyu" uye nokutenda anotenda kuti EHang ichave nemhedzisiro yepasirose muindasitiri, kupfuura chikamu chekutakura vanhu. ”
Dzidza zvakawanda: http://voyage.gentside.com/drone/le-drone-ehang-184-le-premier-vehicule-volant-autonome-electrique-a-usage-personnel_art2864.html
Christiane Taubira anotsvaga mubhadharo wedhipatimendi rekune dzimwe nyika muFrance